६ महीनाको नेपाली अर्थतन्त्र : ७२४ अर्बको आयात ४५ अर्बको निर्यात | गृहपृष्ठ
Home मुख्य खबर ६ महीनाको नेपाली अर्थतन्त्र : ७२४ अर्बको आयात ४५ अर्बको निर्यात
on: March 04, 2019 मुख्य खबर, समाचार
काठमाडौं । गएको साउनदेखि पुससम्म ६ महीनामा देशमा रू. ७२४ अर्बको आयात भएको छ भने रू. ४५ अर्बको निर्यात भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको ६ महीनाको रिपोर्टलाई आधार बनाएर अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको उक्त तथ्यांकले मुलुकको अर्थतन्त्र अझ बढी आयातमुखी बन्दै गएको देखाउँछ । आयात र निर्यातबीचको खाडल ६७९ अर्ब रुपैयाँको छ ।
बढेन पूँजीगत खर्च
समीक्षा अवधिमा आर्थिक वृद्धिदर ६ दशमलव ७ र मुद्रास्फीति ४ दशमलव ६ रहेको तथ्यांकमा उल्लेख छ । सरकारले ६ महीनामा चालूतर्पm रू. २ खर्ब ९६ अर्ब खर्च गरेको छ भने पूँजीगततर्फ रू. ५५ अर्ब ५२ करोड मात्र खर्च गरेको छ । वित्तीय व्यवस्था शीर्षकतर्फ भने रू. २३ अर्ब ७२ करोड खर्च भएको छ ।
चालू खर्चको आँकडा राम्रो देखिए पनि पूँजी निर्माण हुने र अर्थतन्त्रको विस्तारलाई सहयोग पुग्ने पूँजीगत खर्च भने उत्साहजनक देखिँदैन । चालू आवमा सरकारले यातायात, रेलजस्ता पूर्वाधार क्षेत्रमा ठूलो बजेट छुट्याए पनि खर्च हुन सकेको छैन ।
यस्तै, समीक्षा अवधिमा राजस्व पनि लक्ष्यअनुसार उठेको देखिँदैन । ४२९ अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य राखिएकोमा ४०२ अर्ब रुपैयाँ मात्र उठेको छ ।
समीक्षा अवधिसम्ममा शोधनान्तर स्थिति रू. ६३ अर्ब ६८ करोड घाटामा रहेको र सरकारी कोषमा पुस मसान्तसम्ममा रू. १ अर्ब ७८ अर्ब ७५ करोड रहेको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार समीक्षा अवधिमा एक मध्यमस्तरीय कर कार्यालय, ६ आन्तरिक राजस्व कार्यालय र ११ करदाता सेवा कार्यालय स्थापना भएका छन् । पाँचओटा छोटी भन्सारलाई मूल भन्सारमा स्तरोन्नति गरिएको छ ।
यसबीच करदाताको सेवाका लागि रू. १ लाखसम्मको राजस्व ई–पेमेन्टबाट भुक्तानी हुने व्यवस्था गरिएको मन्त्रालयले बताएको छ । ६ महीनाको अवधिमा व्यावसायिक स्थायी लेखा नम्बर लिनेहरू ८५ हजार ४१ र व्यक्तिगत स्थायी लेखा नम्बर लिनेहरू ४६ हजार ८ सय ३७ जना थपिएका छन् । मन्त्रालयका अनुसार, व्यावसायिक स्थायी लेखा नम्बर लिएकामध्ये २० हजार ७४ जना मूल्य अभिवृद्धि करमा र ११ हजार ६ सय १५ अन्तःशुल्कमा थपिएका हुन् ।
जिप्सम खोजीका ४ दशक : समान भूगोलकै देशबाट आयात बढ्दो
हामी नेपाली अर्थतन्त्रको दीर्घकालीन खेलाडी हौं